Kedu mgbe Ị Kwesịrị Dochie Brake Trailer?Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Kedu mgbe Ị Kwesịrị Dochie Brake Trailer?
Enweghị otu ebe doro anya ebe ị ga-etinyerịrị brek ọhụrụ n'ime ụlọ ụgbọala na-adọkpụ.
Kama, ndị na-ahụ maka igwe na ndị na-emepụta breeki na-atụ aro ka idobe ụfọdụ mgbanwe iji nyere aka mee ka ọnọdụ izugbe nke breeki gị aka.Ụdị mgbanwe ndị a, dị ka ịdị arọ nke ụgbọala na-adọkpụ gị, ugboro ịkwọ ụgbọala, ebe ị na-eme njem dị anya, ebe a na-adọkpụ na ọbụna ụdị ịkwọ ụgbọala ga-emetụta nhazi oge ngbanwe breeki ụgbọala na-adọkpụ.
Otú ọ dị, enwere ihe dị ịrịba ama ole na ole ị ga-atụle mgbe ị na-edobe ịdịmma na iguzosi ike n'ezi ihe nke breeki ụgbọala gị na-adọkpụ - yana ndụmọdụ ozugbo sitere na akwụkwọ ntuziaka breeki gị - yana hụ na nchekwa nke ihe ndọta gị.
1. Na 200 Miles maka breeki ejiri aka edozi ya
A na-atụ aro ka ụgbọala na-adọkpụ nke ọhụrụ na-ere ahịa hụ brek ha ka enyocha ma mezie n'akụkụ akara 200-mile.
Ihe dị ka kilomita 200 bụ oge akpụkpọ ụkwụ breeki na ịgbà, akụkụ abụọ bụ isi nke mgbakọ dị n'ime breeki ahụ, ga-anọdụ ala.Akpụkpọ ụkwụ nọ ọdụ nke ọma na ịgbà na-emekọrịta ihe na igwe eletrik eletrik na onye na-ahụ maka breeki nke sistemu braking gị.Ọnụ, iberibe ndị a na-emecha kpalite esemokwu na-akwụsị ụgbọala na-adọkpụ gị oge ọ bụla ị na-akụda breeki n'oche onye ọkwọ ụgbọ ala.
Na-enweghị akpụkpọ ụkwụ na ịgbà, usoro breeki ga-adị nwayọọ, adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ - ọnọdụ kachasị njọ - ọbụna dị ize ndụ.
Ka emechara nyocha breeki dị kilomita 200, a na-enyochakarị breeki ụgbọala na-adọkpụ ihe dị ka otu ugboro n'afọ, n'oge nlele ikike ikike kwa afọ ma ọ bụ ihe ruru oge ịkwọ ụgbọala gị na-adọkpụ chọrọ.
2. Na 12,000 Miles
Na mgbakwunye na nyocha sistemu breeki kwa afọ, a ga-esi mmanụ n'ikiri ụkwụ dị ka ihe dị ka kilomita 12,000 ọ bụla.Maka ụgbọ ala ndị na-adọkpụ na-adọkpụ na-adọkpụ na-adọkpụ mgbe nile na RV nke nwere ụkwụ ise nke na-ahụ ọtụtụ kilomita n'okporo ụzọ, usoro ihe omume ndị ahụ nwere ike na-abụkarị.
Mara, Otú ọ dị, na griiz ma ọ bụ “ịkwakọba” bearings abụghị otu ihe dị ka dochie bearings.Agbanyeghị, ha abụọ bụ usoro yiri nke ahụ na ịbanye n'ime na mpụta ga-achọ usoro ndị yiri ya na ịwụnye breeki ọhụrụ.
3. Mgbe akwụkwọ ntuziaka gị kwadoro
Lelee ntụnye breeki ekwuputara n'akwụkwọ ntuziaka onye nwe ụgbọala na-adọkpụ ma ọ bụ nke onye nrụpụta axle mepụtara.Akwụkwọ ntuziaka ahụ kwesịkwara ịkọwapụta ntuziaka n'ozuzu ya, usoro nzọụkwụ maka otu esi etinye ma dochie ngwa breek kpọmkwem nke ihe nlereanya gị, dozie oche akpụkpọ ụkwụ na ịkwakọba bearings gị nke ọma.
4. Mgbe arụmọrụ breeki na-ata ahụhụ n'ozuzu
Tinye ezi uche ma a bịa n'ichekwa na dochie breeki ụgbọala na-adọkpụ.Ọ bụrụ n’ịhụ mkpọtụ wiilị na-eme mkpọtụ, breeki na-adịghị mma ma ọ bụ ndịiche na nrụgide breeki, oge eruola inyocha ihe mejupụtara ya.Ọ bụrụ na ịhazigharị akpụkpọ ụkwụ breeki ka na-ebipụghị ya, ị nwere ike ịbụ n'ihi ngbanwe usoro.
Caliper eburu ọkara Mpempe akwụkwọ breeki na ọnụ ahịa calipers Caliper Saab Jak Brake Caliper Caliper edoziri Teal breeki Calipers